رمــضـــان الكريـــم RAMADAAN KARIIM | www.maandeeq.webs.com/
رمــضـــان الكريـــم RAMADAAN KARIIM
Fadliyada soomka waa fara badanyihiin, waxaana ka mid ah inuu Rasuulkeena (SCW) uu yiri: “Haduu ramadaan bilowdo albaabada jannada waa la furaa kuwa naartana waa la xiraa”.
Wuxuu kaloo rasuulku yiri: “Qofkii u sooma iimaan iyo ajar dalbid awgeed dambigiisii hore waa la dhaafaa. Wuxuu kaloo yiri nabigeenu (SCW) in jannada uu ku yaalo albaab la yiraahdo “ARRAYAAN” oo ay dadka sooma ka galaan maalinta qiyaamaha, kadibna la xiro oo aan cid kale ka daba galin”. waana bil tawbada laga aqbalo qofkii ka run sheegaya.
•QOFKA AAN SOOMIN:
Qofka maalinta ramadaan ay ku dhaafto cudur daar la’aan ay tahay arin aad u weyn, culimaduna ay ku tilmaantay inuu qofkaasi ka shar badan yahay ka sineysta ama khamri caba. Nabigeena (SCW) wuxuu inoo sheegay in qofka maalin ramadaan ka tagto rukhso la’aan (sida: safarka , xaydka, xanuunka. iwm) aysan ka gudi karin xitaa haduu soomo noloshiisa inta ka dhiman.
•MAXAA SOOMKA BURIYA:
Waxaa soomka buriya qofkoo si ula kac ah wax u cuna, caba ama iska matajiya, caadada(xaydka), dhiiga dhalmada iyo galmada dhacda inta ay qoraxdu soo jeedo (daytime), si hadaba uusan u burin soomkaagu waa in qofku ka fogaado kuwan kor ku xusnay iyo kuwan soo socda oo runtii dadka badankood dhayalsadaan sida: Cayda, xanta, beenta, isku dirka, xasdiga, hadalka macna darada ah(laqwi) iwm. Maxaa yeelay nabigu (SCW) wuxuu yiri: “Qofkii ka tagi waaya hadalka xun iyo ku dhaqankiisa ilaahay dan kama laha cuntada iyo cabitaanka uu ka tagay”.
Sunooyinka soomka waxaa ka mid ah in suxuurta gadaal loo dhigo, afurkana la dadajiyo oo hore loo afuro, Nabigeenu (SCW) wuxuu ku af furan jiray xabad timira ah iyo biyo, wuxuu badin jiray cibaadada, samafalka, sadaqada, akhrinta quraanka, toobada iyo salaada habeenkii ah. Hadaba walaalayaal Nabiga (SCW) waxaa inooga sugnaatay ku dayasho wanaagsan. Soomka ilaahay ayaa inagu wajibiyay waa inaan sidiisa ula nimaadnaa, waa inaan iska ilaalinaa waxyaabaha xun-xun ee ay haboon tahay in qofka soomani ka dhawrsanaado sida: qabiil ku faanistiisa ama caydiisa, kaa soo hadaan soomaali nahay khaasatan adduun iyo aakhiraba ina dhaafiyay, iyo guud ahaanba caadooyinka xun-xun. Waa inaan bisha ramadaan ku soo dhaweyno ficil khayr ah, quraan akhriska, salaada taraawiixda iyo cibaadado kasta oo ilaahay loogu dhawaado, taasoo quraanka iyo sunada waafaqsan, gaar ahaan in lagu dadaalo 10-ka danbe ee ramadaan oo guntiga dhiisha layskaga dhigo. Ugu danbeyntii waxaan idiin rajeynaa bishan barakeysan naxariista Eebe, dambi dhaaf iyo naarta in ilaahay naga xoreeyo.
« kutubta cilmiga ah halkaan ka dooro Axkaamta Soonka »